ဘုန်းကျော်: 05/01/2009 - 06/01/2009
ဧရာဝတီသတင်းဌာနမှ စစ်တမ်းသည် မြန်မာပြည်သူများနှင့် ကမ္ဘာ့ပြည်သူများအား မက်ဆေ့အမှား ပေးသည်နှင့် တူသည်။ စစ်တမ်းမှစကားလုံးသုံးနှုံးပုံကိုပြန်ပြင်သင့်သည်။
မြန်မာနိုင်ငံအစား မြန်မာစစ်အစိုးရ ဟုပြောင်းရမည်။
Burma အစား The government of Burma ဟုပြောင်းရမည်။
အယ်ဒီတာလုပ်လျှင် ရှေ့ နောက်စဉ်စားဆင်ခြင်သင့်ကြောင်းပါ...။
ရေးသားသူ - ဘုန်းကျော် at Sunday, May 31, 2009
အခုထိ ပြည်တွင်းပြည်ပ နိုင်ငံရေးအင်အားစုတွေကနေ ဘယ်လိုအချိန်မှာ ဘာလုပ်ပါလို့ ရဲ ရဲ ၀ံ့ဝံ့ ပြောတာ မတွေ့ သေးဘူး။ ကျနော့်စိတ်ထင်တခုခုများမှားနေသလား။ အခုကတည်းက ကိုသီးဇွန်လို လုပ်ရင်ကောင်းမယ်။ ကျနော် မသိတာလည်း ဖြစ်ရင်ဖြစ်မယ်။ အဓိက အင်းစိန်မှာ စုံရပ်ထားပြီး ချဖို့ဆိုတာကို လုပ်ရမယ်။ ဆန္ဒပြပွဲ Plan ကို NLD ကရေးပြီး လူထုကို ဦးဆောင်ရင်ပိုကောင်းမယ်။ ဦးအောင်ရွှေနဲ့အပေါင်းအပါကို အားမကိုးပါနဲ့။ သူတို့အသက်ကြီးပြီ။ လုပ်ဖို့လည်း ဆန္ဒ ရှိတဲ့ပုံမပေါ်ဘူး။
ကဲ...မထူးဘူး။ ကိုမိုးသီးရေ... နယ်စပ်ကနေ အင်းစိန် ကိုရောက်အောင်သွားသင့်ပြီ။ ဘယ်သူမှ ကယ်မဲ့သူမပေါ် သေးဘူး။ အဘဦးဝင်းတင်တစ်ယောက်တည်း အားနည်နေပြီ။ ကိုမင်းကိုနိုင်လည်း အခုလောက်ဆို မျှစ် စားနေ လောက်ပြီ..။
FDB ရဲ့  Plan လည်းအတိအကျမသိသေးဘူး။ ပြည်တွင်းလုပ်ငန်းလောက်နဲ့ရွာလည်တုံးပဲ။ လူတိုင်းနားလည် အောင်ရှင်းရှင်းလင်းလင်း အကြံပေးကြပါ။ ဦးဆောင်ကြပါ။ အာဏာအရ ယူပါ။ စစ်အာဏာရှင်မလိုချင်တော့ပါ ဘူး။
ရေးသားသူ - phonekyaw at Saturday, May 23, 2009
ရေးသားသူ - ဘုန်းကျော် at Thursday, May 21, 2009
Video Click for this week
The best movie for this week!
ယခုဓာတ်ပုံအား မြန်မာပြည်သား အတော်ဆုံးဘလော့ဂ်ဂါ ဆရာဆွေ ထံမှကူးသည်။
ကြည့်...အသက်ကြီးပေမဲ့ ရှေ့ က သတ္တရှိရှိ လူထုကိုဦးဆောင်နေပြီ။ ဘယ်မှာလဲကွ စစ်သားဟောင်းတွေ။ စစ်သားဟောင်းတွေဖြစ်တဲ့ ဦးအောင်ရွှေတို့အဖွဲ့ ဘယ်ချောင်မှာရောက်နေလဲမသိ။ အတိုက်အခံ ခေါင်းဆောင် လုပ်နေပြီး တခါမှရှေ့ ကထွက်ရပ်တာ မတွေ့သေးဘူး။
စက်တင်ဘာမှာတုံးကလည်း လက်အုပ်ချီတာလောက်ပဲတွေ့ဘူးတယ်။ ဒါ့ကြောင့် ကျနော်ပြောတာ ဘယ်တော့မှ စစ်သားတွေကို သူတို့ ခေါင်းဆောင်တွေကိုတော်လှန်ဖို့မပြောနဲ့။
ထပ်ပြောပါတယ်.. အဘဦးဝင်းတင် NLD ဥက္ကဌလုပ်သင့်တယ်။
သန်းရွှေတို့ အုပ်စုမကြာခင် အင်းစိန်ထောင်ထဲမှာ ပြည်သူတွေ တွေ့ရတော့မယ်။
အင်းစိန်မှာ စတဲ့ တော်လှန်ရေး အင်းစိန်မှာ အဆုံးသတ်စေရမယ်။
ရေးသားသူ - ဘုန်းကျော် at Monday, May 18, 2009
နေကာအမဲ နဲ့ လူ
နေကာအမဲ နဲ့ လူဟာ မသိရင်၊ ဘာဂိုဏ်းကလိုလို ညာဂိုဏ်းကလိုလို။ အဲလိုမထင်ပါနဲ့။ Holiday တစ်ရက်မှာ အပျင်းပြေလမ်းလျှောက်ရင်း မျက်စိအရသာ ခံစားနေတာပါ။ သူဟာတခြားသူတော့မဟုတ်ပါဘူး.. ကျနော်တို့ရဲ့  ရဲဘော်ကြီး...သူသာလျှင်ဖြစ်ပါတယ်။ ရှု့ စားတော်မူကြပါကုန်။
ရေးသားသူ - ဘုန်းကျော် at Friday, May 08, 2009
မျက်ရည်တွေနဲ့ ရေးတဲ့ ကိုအောင်ဒင်
ကိုအောင်ဒင်ကို တခါမှမမြင်ဘူး၊ မတွေ့ဘူးပါ။ Radio နဲ့ အွန်လိုင်းမီဒီယာမှာ လောက်သာ ရင်းနှီးပါတယ်။ အစဉ်တစိုက် တော်ထဲမဟုတ်တဲ့တော်လှန်ရေုးကို သူလုပ်တယ်လို့လည်းသိရပါတယ်။ ဒီနေ့ ကိုမိုးသီးဇွန်ရဲ့ ဘလော့ မှာ သူ့အဖေအတွက် အမှတ်တရ ဆောင်းပါးကို သူကိုယ်တိုင်ရေးထားတာတွေ့လို့အခုလို ရေးဖြစ်ပါတယ်။ စာထဲမှာ တွေ့ရတဲ့ ရသ, အတော်များများဟာ စာဖက်သူ(တန်ဖိုးထားသူ) တွေကို မချိမဆံ့ဖြစ်စေတယ်။ လေးစားမှုရသ၊ တန်ဖိုးထားမှုရသ၊ ဖခင်တစ်ယောက်ရဲ့ သားအပေါ်ဖြစ်စေချင်မှု့၊ ဘ၀တန်ဖိုး၊ ခံယူချက်၊ မရေနိုင်တဲ့ ခံစားချက်တွေကို ကိုအောင်ဒင် မျက်ရည်တွေနဲ့ရေးခဲ့တယ်ဆိုတာကို ဖတ်စေချင်ပါတယ်။ ဒီကိုသွားလိုက်ပါ တန်းဖိုးမဖြတ်နိုင်တဲ့ ခံစားချက်ကိုတွေ့ရပါလိမ့်မယ်။
ရေးသားသူ - ဘုန်းကျော် at Thursday, May 07, 2009
မြန်မာမီဒီယာတိုင်း နားဂစ် တစ်နှစ်ပြည့်အထိမ်းအမှတ် ရေးကြပြောကြ။ တနှစ်ပြည့်တာကို ဘာ့ကြောင့် အရေးတ၀င့်ပြောရတာလဲ။ ပေါ်ပြူလာ လိုက်လုပ်တာလားမသိ။
နားဂစ် ၆ လနဲ့ သုံးရက်ပြည့်၊ နှစ်လ နဲ့ ၇-ရက်ပြည့် လို့ ဘာ့ကြောင့်မလုပ်တာလဲ။
တနှစ်ပြည့် မှ မလုပ်ရင် ခေတ်မမှီတော့သလို။ လူတွေက နားဂစ်အတွက် မွေးနေ့ပွဲ (Birthday) လုပ်နေသေးတယ်။ သြော်..မြန်မာလူမျိုးတွေ..။
နာဂစ်ဆိုတာ မြန်မာနိုင်ငံမှာ ရက်တွေ၊ လတွေ နှစ်တွေကို အကန့်အသတ်နဲ့ သတိရကောင်းတဲ့အရာ မဟုတ်ပါဘူးဆိုတာ..။
ရေးသားသူ - ဘုန်းကျော် at Sunday, May 03, 2009
တောင်းဆိုချက် (၃) ရပ်မရရင် ဘာလုပ်မှာလဲ NLD?
ဘိုးဘိုးကြီးတို့ကတော့ တောင်းဆိုချက်သုံးရပ် ပေးရင်ရွေးကောင်ပွဲဝင်မယ်တဲ့ဗျာ..။ ဒီသုံးခုမရရင်ကော ရှေ့  ဘာဆက်လုပ်မှာ လဲဆိုတာကို ရှင်းရှင်းလင်းလင်းမသိရသေးဘူး။ အရင်းတုန်းကလည်း ဒီအတိုင်းဘဲ။ အထူးကြေငြာချက်၊ တောင်းဆိုချက်တွေထုတ်တာ နအဖ က ဖုတ်လေတယ်ငပိရှိလေတယ်လို့တောင် မထင်ဘူး။ တောင်းဆိုချက်သုံးရပ်ကို နအဖက ပေးရင် နွေခေါင်ခေါင် မိုးကြိုးပစ်လိမ့်မယ်။
၁) အဖွဲ့ချုပ်ခေါင်းဆောင်များအပါအ၀င် နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားအားလုံး ခြွင်းချက်မရှိ ပြန်လွှတ်ပေးရေး၊
၂) ၂၀၀၈ ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေမှ ဒီမိုကရေစီစံနှုန်းများနှင့် မကိုက်ညီသည့်အချက်များကို ပြင်ဆင်ပေးရေး
၃) အားလုံးပါဝင်နိုင်မည့် လွတ်လပ်၍ တရားမျှတသော ရွေးကောက်ပွဲအဖြစ် နိုင်ငံတကာ၏ စောင့်ကြပ်လေ့လာမှုကို ခွင့်ပြုရေး။
ရေးသားသူ - ဘုန်းကျော် at Friday, May 01, 2009